AKHRISO: Maxaa dhaliyay Jahwareerka ka taagan magaalada Jigjiga? | allsaaxo online
AKHRISO: Maxaa dhaliyay Jahwareerka ka taagan magaalada Jigjiga?
Xiisada ka taagan magaalada Jigjiga ayaa salka ku heysa xiriir xumo u dhaxeysa Ismaamulka Soomaalida Itoobiya iyo dowladda Federaalka Ethiopia, waxaana ay keentay in ciidamo ka tirsan Meletariga dowladda Ethiopia gudaha u galaan magaalada Jigjiga.
Wararka ayaa sheegaya in Ciidamada Federaalka Itoobiya oo ku hubeysan gaadiidka gaashaaman ayaa la wareegay xarumaha muhiimka sida xarunta Baarlamaanka iyo Xarunta Telefishinka ESTV.
Dadka ayaa Mudaaharaadyo dhigaya, waxayna Gubeen Calanka Dalka Ethiopia iyo Kaniisad ku taalay magaaladaasi, sida dadka degaanka ay xaqiijiyeen
Qaar kamid ah wasiiradda maamulkaasi iyo Guddoomiyaha baarlamaanka ayaa sheegay inay ka xumaadeen waxa saaka dhacay, waxayna ugu baaqeen shacabka inay difaacaan degaankooda.
Wararka dheeriga ah ee aan heleyno ayaa sheegaya in Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida Itoobiya ayaa looga yeeray magaalada Addis Ababa, lama oga ilaa iyo hadda halka uu ku sugan yahay, waxaa soo baxaya in la xiray madaxweynaha, walow aan la xaqiijin wali.
Cabsi xoogan ayaa ka taagan magaalada Jigjiga, waxaana la arkayaa ciidamo badan oo ka tirsan Liyuu boolis, kuwaasi oo tababar gaar ah qaba oo magaalada Joogo, waxaana laga baqayaa inay xaaladda is badasho.
Xiisada ka jirta Jigjiga ayaa timid, maalin kaddib markii magaalada Diri-dhaba uu ka dhacay shir ay isugu yimaadeen dhinacyo ka soo horjeeda Maamulka uu hoggaamiyo Cabdi Maxamuud Cumar
Mucaaradka dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ku baaqay shacabka inay is-dejiyaan islamarkaasna ay ilaaliyaan nabadgelyada.
Waxay sidoo kale ugu baaqeen hoggaamiye dhaqameedyada ay inay ka shaqeeyaan xasiloonida iyo xallinta dhibaatooyinka soo food saaro shacabka.
Mucaaradka ayaa sidoo kale sheegay inay ku faraxsan yihiin in miltariga ay soo farageliyaan maamulka Soomaalida.